Tarkaanfiin magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee keessatti basaasotaa fi – Kichuu
HomeNewsAfricaTarkaanfiin magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee keessatti basaasotaa fi
Ebla 21,2017) Tarkaanfiin magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee keessatti basaasotaa fi qabeenya isaa irratti fudhatamaa jiru kan isa yaaddesse wayyaaneen naannawa tarkaanfileen fudhatamaa jiranitti waraana bobbaasuun hubatame.
Raafama wayyaanee magaalaa Finfinnee keessatti guyyoota lamaan kana keessatti mudatee jiru.
Guyyaan yoodannoo gootota Oromoo Ebla 15 erga irraa qabee magaala Finfinnee keessatti humni addaa diina faana dha’ee ciraa jiru akkasuma qabeenya ishii barbadeessa jiru wayyaaneetti yaaddoo naqee jira.
Keessumaa Ebla 18 fi 19,2017 kana Finfinnee keessatti tarkaanfii diina irratti halkan halkan haxa kutee dhabamsiisaa jiru jabatuu irraan wayyaaneen naannolee tarkaanfiin kun itti heddummatan humna waraanaa halkanii guyyaa qubachiisee sakatta’iinsa gochaa jira.
Kutaa magaalaa Addis Katamaa fi Yakkaa akkasuma naannoo Nifaas Silkii jedhaman keessa waraanni wayyaanee yeroo ammaa kana baay’inaan keessa sossohaa jira. Egaa wayyaaneen yeroo ammaa mana mana isheetiif sodaan itti dhaga’amu irraan saroota ishee mana jireenya isheetti marsitee of eegsisnuu eegaltee jirti